कोरियामा हुनुहुन्छ? घरको याद आयो ? यसो गर्नुहोस ! – Korea Pati
March 19, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियामा हुनुहुन्छ? घरको याद आयो ? यसो गर्नुहोस !
आफ्नो परिवार अनि गाँउ घर छाडेर अन्यत्र जाँदा भोग्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको आफन्त, माया गर्नेहरुको अभाव हो । सधैं बसिरहेको ठाँउ छाडेर अन्यत्र जानु सहज छैन । अझ देशै छाडेर परदेशिनु त झनै सजिलो छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक समस्यासंगै मानसिक र भावनात्मक कठिनाइ पनि उतिकै हुन्छ । कठिनाइ र दूरी हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो समय पढ्न र काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या उच्च छ ।
उच्च तलब पाउने अनि छोराछोरी एवम् परिवारका सदस्यको भविष्य उज्जवल बनाउने सपना लिएर विदेश जाने त झनै धेरै छन् । पढ्न गएकाहरु पनि विदेशमै ‘सेटल’ हुने क्रममा पनि बढेको छ ।काम गरेर खान त्यति सजिलो भने हुँदैन । चाहे नेपालमा होस् कोरिया वा विश्वका अन्य कुनामा नै किन नहोस् कुनै पनि काम सहज भने पक्कै हुँदैन ।
अनि यस्तोमा बारम्बार सताइरहने घर, परिवार, आफन्तको यादले झन परदेशमा जीवन कष्टकर बनाउँछ । यसलाई सहज रुपमा लिनु भने हुँदैन । यसले नयाँ वातावरणमा भिज्ने व्यक्तिको क्षमतालाई प्रभावित पार्दछ । अनि यसले उल्टै सो व्यक्तिको कार्य प्रदर्शन र समग्र मानिसक स्वास्थ्य र व्यवहारमा पनि असर गर्न थाल्छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले विदेशमा भर्खरै आएका अनि लामो समयदेखि यतै रहँदै आएकाहरुले घरको यादसँग जुझ्ने तरिकाहरुबारे बताउन गइरहेका छौं ।
१. घरमा फोन गर्न नियमित समय छुट्टयाउने
पछिल्लो समय सञ्चारका विविध उपायहरु छन् । हिजोआजको प्रविधिले दूर दराज अनि दूर्गम ठाँउलाई पनि जोडेको छ । दूरी विस्तारै सीमित बन्दै गइरहेको छ । हातमा स्मार्टफोन वा घरमा ल्यापटप (वा यस्तै खालका अन्य उपकरणहरु) छ भने त इन्टरनेटको माध्यमबाट भाइबर, स्काइप, वि च्याट, ह्वाट्स एप, फेसटाइम, फेसबुक, गुगल डूओलगायत अनेक एपहरुले तपाईलाई एक सेकेन्डमै आफन्त अनि साथीभाइसँग जोडिन सकिन्छ ।अनि यी एपहरुको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको दुबै तर्फ इन्टरनेट छ भने आफूलाई जति बेला मन लाग्यो उतिबेला निःशुल्क फोन वा म्यासेज पठाउन सकिन्छ । तर यसका लागि आफूलाई पायक पर्ने अनि कुरा गर्न मिल्ने समय छुट्टयाएर आफन्तहरुसँग बिना रोकतोक कुराकानी गर्न सक्नु हुनेछ । यसो गर्दा उनीहरुसँग तपाईले राम्रो समय बिताउन सक्नु हुनेछ अनि घरको याद पनि कम गर्न मद्दत मिल्छ ।
२. नियमित अपडेट लिने
तपाईले कहिलेकाँही नजिकका साथीभाइहरुलाई अचानक फोन गर्ने अनि उनीहरुको हालखबर सोध्ने त गर्नु भएको छ होला । घर परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तै गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईको यस्तो बानी छैन भने अचानक फोन गरेर के छ कसो छ सोध्ने वा भ्याइएन भने सानो म्यासेज नै पठाउन पनि सक्नु हुनेछ । यसो गर्दा आफन्तहरुलाई पनि यसले हाम्रो बारेमा सोच्दो रहेछ भन्ने छाप पर्छ । उनीहरुलाई खुसी दिन्छ । अनि उनीहरुले पनि तपाईलाई यस्तै गर्दा तपाईको पनि त पीडा कम हुन्छ अनि खुसीको स्तर बढ्छ नि हैन ? हामी टाढा हुँदा साथी भनेकै यस्तै खालका मिठो सम्झना, बोलीचाली अनि याद त हो नि ।
३. फुर्सदको समयमा नेपाली फिल्महरु हेर्ने
तपाई देशमा हुँदा के गर्नु हन्थ्र्यो ? पक्कै पनि समय मिलाएर टिभी हेर्ने वा फिल्महरु हेर्ने गर्नु हुन्थ्यो होला । विदेशमा छँदा टिभी वा यूट्यूबमा नेपाली शो वा फिल्महरु हेरेर पनि तपाईले समय कटाउन सक्नु हुन्छ । यसले देशभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । आफन्तहरुसँग कुराकानी गर्दा वा च्याट गर्दा गफ गर्ने अन्य बाहानाहरु प्नि यसले दिन्छ ।
४. आफ्नो समुदायमा भएका अन्य नेपालीहरुसँगको भेटघाट
तपाई विश्वको जुनसुकै कुनामा गएपनि आफू आसपास आफ्नो देशबाट आएको मानिसहरु छन् भने पनि आत्मिय महसुस हुन्छ ।कोरियामा पनि कयौं नेपालीहरु छन् । तपाईको विश्वविद्यालय वा कार्यस्थल वा समुदायमा नेपालीहरु पक्कै देख्न सक्नु हुन्छ । उनीहरुसँग घुलमिल हुने अनि समय बिताउँदा पनि घरबाट टाढा हुनुको पीडका कम गर्न मद्दत मिल्छ । यस्तो महसुस गर्ने त आफू एक्लै होइन रहेछु भन्ने भावनाले पनि राहत दिन्छ । एक अर्कासँग मन कसरी भुलाउने अनि विदेशमा बस्दा व्यस्त कसरी रहने भन्ने विषयमा एक अर्काको अनुभव, टिप्स र विचार साट्न सकिन्छ ।
यसै क्रममांमित्रता विकास भएर तपाईले घरमा साथीभाइसँग मिलेर गर्ने गतिविधि गर्न पो सक्नु हुन्छ कि ? यस्तो भयो भने विदेशमा बस्दा भोग्नु पर्ने अनेक समस्याहरुमध्ये कम्तिमा घरको यादले सताउने समस्या कम हुन सक्छ ।विदेश होस् वा स्वदेश परिवारसँग टाढा बस्दा घर परिवारको यादले सबैलाई सताउँछ । जहाँ रहेपनि घर परिवारको यादले सताउनु तनावको मुख्य स्रोत मध्ये एक हो । तर सबै जनामा योसँग लड्न सक्ने अनि सोही अनुसार व्यवहार गर्न सक्ने साधन र क्षमता नहुन पनि सक्छ । कसैले त्यसको सामना राम्ररी गर्छन् त कोही सहन नसकेर घरै फर्कने पनि गर्छन् । यद्यपि, हामीहरु सकेसम्म चाँडै अनि दीर्घकालीन अवस्थामा समेत यसको सामना गर्न भने तयार रहनु पर्छ ।
आजको यस लेखले तपाईहरुलाई पक्कै पनि यस काममा सघाउनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । तपाईहरुलाई घरको यादले सताउँदा के गर्नु हुन्छ । माथि बताइएका भन्दा फरक उपायहरु पनि छन् भने तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई बताउन सक्नु हुनेछ ।